May 2019 – Kalfadhi
Maxaa ka ogtahay waajibaadyada shaqo ee guddiga amniga ee golaha wakiillada Puntland? – Warbixin
May 31, 2019 Cabdiraxmaan Maxamed
Guddiga amniga iyo nabadgelyada ee golaha wakiillada Puntland waa mid ka mid ah tobanka guddi ee golaha kuwooda ugu muhiimsan ee la xisaabtanka iyo kor-joogtaynta ku leh hay’adaha amniga iyo nabadgelyada ee xukuumadda. Waxaa xilligan hoggaaminaya Gen. Cabdicasiis Siciid Gacamey oo mudo dheer ka shaqaynayay ciidamada isla markaasna xiliyo kala duwan soo noqday taliyaha ciidanka booliska Puntland in kastoo uu lixdii sano ee ugu dambeeyay xubin ka ahaa golaha wakiillada. Wuxuu ka mid ahaa baarlamankii Afraad, wuxuuna mar kale dib ugu soo guulaystay xubinta baarlamanka doorashadii dhowayd. Bartamihii febraayo ayaa…
Sen Nuuro Faarax “Magacaabista duqa Beladweyne waxay ka dhigantahay in dumarka siyaasadooda soo kabanayso”
May 30, 2019 Kalfadhi
Senator Nuuro Faarax Jaamac oo katirsan xubnaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo dhoweysay duqa cusub ee loo magacaabay magaalada Beladweyne ee xarunta gobalka Hiiraan taas oo ah Haweeney aqoonyahaan qurba joog ah. Duqa cusub ee magaalada Beladweyne waxaa dorraad loo magacaabay Safiya Xasan Cali (Muniika) oo hore u aheyd Guddoomiyaha degmada Shibis ee gobalka Banaadir waxaana lagu maacaabay digreeto ka soo baxday Madaxweynaha Hirshabeelle. Senator Nuuro Faarax Jaamac ayaa sheegtay in ay tallaabo wanaagsan tahay magacaabista duqa Beladweyne oo ah dumar waxayna sidoo kale sheegtay in ay soo…
Senator Ayuub oo kulamo wadatashi ah la qaadanaya dhalinyarada gobalka Awdal ee Soomaaliland
May 30, 2019 May 30, 2019 Kalfadhi
Senator Ayuub Ismaaciil Yuusuf oo katirsan Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya islamarkaana laga soo doorto gobalka Awdal oo katirsan degaanada maamulka Soomaaliland ayaa lagu wadaa in uu kulan Caawa la qaato qaar kamid ah dhalinyarada gobalkaasi. Dhalinyaradaan oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa kulanka ay la qaadanayaan Senator Ayuub waxa uu dhici doonaa 30-ka bisha May ooo Caawa ku beegan waxaana Senator-ku sheegay in ay isaga iyo dhalinyarada ay kawada hadli doonaan xaaladda Soomaaliya. “Waa kulan wadatashi ah oo aan uga arinsan doono xaaladda Soomaaliya iyo is arag…
May 29, 2019 Kalfadhi
Guddiga Arimaha Bulshada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa kormeeray qaar kamid ah goobaha ay imtixaanka ku gelayaan ardayda Soomaaliyeed ee sanadkaan ka baxaya dugsiga Sare islamarkaana maalintii 3aad u fadhiya imtixaanka Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya. Guddoomiyaha Guddiga Arimaha Bulshada ee Golaha Shacabka Xildhibaan Cali Cusmaan Xirsi iyo Guddoomiye ku xigeenka Guddiga Xildhibaan Aamino Maxamed Cabdi ayaa u sheegay ardayda imtixaanka galeyso in waxbarasho dibadda ah ay dowladda Soomaaliya u raadin doonto kuwaada gala kaalmaha hore ee imtixaanka. Guddiga goobaha ay booqdaan waxay isugu jiraan keydadka imtixaanka aan wali la gelin…
Cabdifitaax Qaasim oo katirsan xubnaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay imtixaanka Qaranka oo ay qaadeysa Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya iyo doodo wali arintaasi ka taagan. Xildhibaan Cafitaax ayaa sheegay in uu jiro kala aragti duwanaansho u dhaxeeya bulshada Soomaaliyeed oo ku saabsan imtixaanka Qaranka kuwaas oo aad u dhaliilaya Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre. “Kala arag duwanaanshaha siyaasadeed iyo mucaaradnimada Wasiirka waxbarashada yaan lagu dabaqin mustaqbalka ardayda Soomaaliyeed” ayuu yiri Xildhibaan Cabdifitaax Qaasim oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya. “Waxaan arkay dad ay ku…
May 28, 2019 May 28, 2019 Cabdiraxmaan Maxamed
Xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan golaha shacabka baarlamanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka hadlay xarig Muqdisho loogu geystay suxufiga Cali Aadan Muumin oo ka tirsanaa warbaahinta maxaliga ah ee Goobjoog. Wuxuu ku tilmaamay inuu xarigaas yahay mid sharci-daro ah. Xildhibaan Mahad Salaad ayaa intaas kadib ugu baaqay baaqaynaa hay’adaha amniga in si degdeg ah oo shuruud la’aan ah ay xorriyadiisa ugu soo celiyaan suxufigaas. “Xariga Wariye Cali Aadan Muumin wuxuu daliil cad u yahay siyaasada kaligiis taliyenimada ah ee uu higsanayo Maamulka Madaxweyne Farmaajo ee lagu caburinayo warbaahinta…
Xildhibaan Jindi oo dhaliilay siyaasadda dowladda federaalka ee ku wajahan doorashooyinka Jubbaland
Xildhibaan Cabdirisaaq Jindi oo ka tirsan golaha shacabka baarlamanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa cambaareeyay wax uu ku sheegay fara-gelin qaawan oo lagu hayo dowlad-goboleedka Jubbaland. Waraysi uu siiyay warbaahinta Kalfadhi wuxuu ku sheegay in ay jirto faragelin qaawan oo ay dowladda federaalku ku hayso arrimaha Jubbaland oo dhowaan geli doonta doorasho, taas mid la mid ahna hore loogu hayay Galmudug. Nidaamka federaalka ee dalka ayuu sheegay inuu yahay mid muhiimad weyn leh loona baahan yahay in dowladdu ay iska xilsaarto sidii wada-shaqayn looga dhex abuuri lahaa dowladda federaalka iyo…
Xaldhibaan Odawaa” Xarigga iyo caga juglaynta saxaafadda waa calaamad aan u fiicneyn dowladnimada Soomaaliyeed”
May 28, 2019 Kalfadhi
Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa), oo katirsan Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa cambeerayay Xaragga Cali Aadan Muunin, oo katirsan wariyaasha Idaacadda Goob-joog ee magaalada Muqdisho. “Waxaan cambaareynayaa xarigga loo geestay wariye Cali Aadan Muumin oo ah wariye dhalinyar kana tirsan Radio Goobjoog” ayuu yiri Xildhibaan Odawaa oo qoraal soo dhigay bartiisa facebook. Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawaa ayaa sheegay in xarigga iyo caga jugleynta saxaafadda ay tahay calaamad aan u wanaagsaneen dowladnimada Soomaaliya waxa uuna ku baaqay in si deg deg ah loo sii daayo. “Xarigga iyo caga…
Xildhibaan Nuur Xaashi oo ku taliyay in Hirshabeelle ciidamadeeda Booliiska la kordhiyo
Xildhibaan Nuur Xaashi Warsame oo katirsan Golaha Wakiilada Maamulka Hirshabeelle ayaa soo dhoweeyay dhalinyaro cusub oo kamid noqonaya booliiska maamulka Hirshabeelle oo shalay tababar looga furay magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaasi. Xildhibaan Nuur Xaashi ayaa madaxda ugu baaaqay in la kordhiyo fursadaha nuucaan ah si loo sugo amaanka Hirshabeelle islamarkaana maamulka u yeesho ciidamo tayeeysan oo dadweynaha u adeega. “Waxaan soo dhoweynayaa dhalinyarada cusub ee isugu jira Gabdhaha iyo Wiilasha ee ku soo biiray booliiska Hirshabeelle, waxaan u rajeynayaa guul iyo in ay gargaaraan dadka Hirshabeelle” ayuu yiri Xildhibaan Nuur…
Xildhibaan Cadirashiid Xidig ayaa sheegay in amaanka Jubaland yahay mid ku kooban 8KM
Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xiddig, oo ka mid ah Xildhibaanadda Golaha Shacab ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ee u taagan qabashada Xilka Madaxweyha Maamulka Jubaland ayaa sheegay in maamulka Jubaland looga baahnaa in ay xaqiiyaan amaanka guud ahaan degaanadda hoostaga Jubaland balse hada ku kooban yahay oo kaliya 8KM oo kaliya. “Waxaad u jeedaan in amaanka Jubaland uu ku kooban yahay 8 KM oo Kismaayo dhexdeeda ah” ayuu ku yiri Xildhibaan Cabdirhiid Maxamed Xidig oo la hadlayay mid ka mid ah waxgarada beelaha dega Jubooyinka. Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig, ayaa sheegay in…